“ရျောနယျဒိုကို အသငျးက အမွနျဆုံးထုတျပဈ” ဂြူဗငျတပျဈကို အကြိုးပွုလာမယျ့ အယျလီဂရီရဲ့ သတိပေးခေါငျးလောငျးသံလား – Sports A2Z
ဂြူဗငျတပျဈနညျးပွဟောငျး အယျလီဂရီဟာ ၂၀၁၈ ခုနှဈက နညျးပွရာထူးကို မစှနျ့ခငျမှာ အသငျးဥက်ကဌ အနျဒရယော အကျဂျနယျလီကို သတိပေးစကားတခှနျး ပွောခဲ့ဖူးတယျ။ အဲဒါက ” ရျောနယျလျဒိုကို အသငျးကနေ အမွနျဆုံးထုတျပဈပါ။ သူက ငါတို့အသငျးရဲ့ တိုးတကျမှုကို ပိတျဆို့ထားတယျ ” ဆိုတာပါ။
လကျရှိမှာ သတငျးတှေ အဖောငျးပှဆုံးဖွဈလာပွီး အငွငျးအခုံတှေ အမွငျ့တကျဆုံးဖွဈလာတာက အိုးလဒေီအသငျးနဲ့ ရျောနယျလျဒိုတို့ လမျးခှဲခြိနျတနျပွီဆိုတဲ့ ဝဖေနျမှုတှပေါ။ တဖကျနဲ့တဖကျ အကြိုးမပွုနိုငျဘဲ နှဈဖကျရှုံးအခွအေနကေို ရငျဆိုငျနရေတယျ။
ဒီအနအေထားမှာ ဂြူဗငျတပျဈက အနာခံပွီး သူ့ကို ဆကျထိနျးထားသငျ့လား? အမွနျဆုံး ရောငျးထုတျသငျ့ပွီလား? ဆိုတဲ့ အဆုံးအဖွတျခြိနျကို ရောကျလာတယျ။ အနာခံရတယျဆိုတာက ပထမအခကျြအနနေဲ့ ဂြူဗငျတပျဈက ဝငျငှအေရ အရမျးအထိနာခြိနျဖွဈနတေယျ။
ဒါတှကေ အဘကျဘကျက တှကျခကျြမှုတှေ ရှိနတေယျ။ ရျောနယျလျဒိုက သူ့ရဲ့ပုံရိပျနဲ့ ဂြူဗငျတပျဈရဲ့ပုံရိပျကိုထပျပွီး ရှကေိုရှခေငျြးထပျ မွတျတဲ့ပေါငျးဖကျမှုအဖွဈ ထငျမွငျနခြေိနျမှာ တကယျ့ကိနျးဂဏနျးလကျတှအေ့ခွအေနကေ အမြားထငျသလို မဖွဈခဲ့ဘူး။
နောကျတခကျြက ကှငျးတှငျးမှာ ကရြှုံးတယျ။ ရျောနယျလျဒိုရောကျလာလို့ ဂြူဗငျတပျဈက နောကျတဆငျ့မွငျ့တဲ့အသငျးဖွဈလာမယျလို့ မြှျောလငျ့ထားခဲ့ပမေယျ့ အသငျးခွစှေမျးနဲ့ အောငျမွငျမှုကို ကွညျ့ရငျ ဒုံရငျးကဒုံရငျးပဲ ဆိုတာကို မွငျတှရေ့မှာဖွဈလို့ ဒါဟာလညျး မှားယှငျးသှားခဲ့တယျ။
နောကျထပျတခကျြကတော့ လကျရှိနညျးပွ ပီယာလိုရဲ့ ဘောလုံးဒဿနနဲ့ ရျောနယျလျဒိုရဲ့ကစားပုံက ပွဒါးတလမျး သံတလမျးဖွဈနတေယျလို့ အမွငျခံထားရတယျ။ ရျောနယျလျဒိုကို အသငျးက အကြိုးမပွုနိုငျတော့သလို အသငျးကို ရျောနယျလျဒိုက အကြိုးမပွုနိုငျတော့ဘူး။
ရျောနယျလျဒိုက သူ့အကြိုးကိုတော့ သူပွုနဆေဲဖွဈတယျ။ စီးရီးအမှော ၂၇ ပှဲကစားပွီး ၂၅ သှငျးထားပွနျတယျ။ ဒီနှဈမှာ စီးရီးအရှေဖေိနပျဆုက သူ့လကျထဲရောကျလာတော့မယျ့ တဦးခငျြးအောငျမွငျမှုဖွဈတယျ။ သူက တဦးခငျြးဆုတံဆိပျတှကေိုသာ ထိုငျကွိတျခငျြနတေဲ့သူလို့လညျး ကောငျးကောငျးအပွောခံထားရတယျ။
ဂြူဗငျတပျဈကဘကျလညျး သူ့ကို တနှဈကို ယူရို ၃၁ သနျး ပေးခရြေတယျ။ ဒီရငျးနှီးမွှုပျနှံမှုမှာ အသငျးဘကျက ပွနျရတာက သငျးတယျ။ ဒီနှဈခနျြပီယံလိဂျက ပွုတျတယျ။ ၁၆ သငျးအဆငျ့နဲ့ ဖြာလိပျရတယျ။ ရျောနယျလျဒိုရောကျလာတဲ့ ၂၀၁၈ ကစကွညျ့ရငျ ခနျြပီယံလိဂျအမွငျ့ဆုံးရောကျတာက ကှာတားအဆငျ့သာဖွဈတယျ။
ဒီနှဈက ပိုဆိုးတယျ။ ဂြူဗငျတပျဈရဲ့၁၀ နှဈတာအတှငျး အဆိုးရှားဆုံးရာသီကို ရငျဆိုငျရတော့မယျ။ အတ်တလနျတာကို ရှုံးပွီးခြိနျမှာ စကူဒတျတိုဖလားကို မြှျောလငျ့ခကျြမဲ့သှားပွီ။ ဒီအမှတျပေးဖလားဆိုတာ ဂြူဗငျတပျဈက ၉ နှဈဆကျတိုကျ သိမျးပိုကျခဲ့တာဖွဈတယျ။ ဒါကွောငျ့ ပိုရငျနာနကွေတယျ။
အဆငျ့ ၅ ကို ဆငျးရတယျ။ ခနျြပီယံလိဂျဝငျခှငျ့ရဖို့သာ ရှေးခယျြစရာရှိတော့တယျ။ အောငျမွငျမှုဆိုတာ မူးလို့ ရှုစရာတောငျမရှိတဲ့နှဈဖွဈလာခဲ့တယျ။ ရာသီသိမျးကို အဆငျ့ ၄ လုဖို့ ပွိုငျဆိုငျရမယျ့ အခွအေနေ အိုးလဒေီရဲ့ သိက်ခာကို ကောငျးကောငျးသတျပါတယျ။
တသငျးလုံးအနအေထားမှာ စိတျမကောငျးစရာတှေ တခုပွီးတခုဖွဈလာတယျ။ ရျောနယျလျဒိုကတော့ ရှဖေိနပျဆုကို ပွေးပိုကျဦးမယျ။ ဂြီနိုအာနဲ့ပှဲမှာ ဂိုးမရလို့ အဝတျလဲခနျးနံရံကို လကျသီးနဲ့ထိုးတယျ။ ဂြာစီကို လှငျ့ပဈတယျ။ အသငျးကို ဦးဆောငျရမယျ့သူတယောကျက အသငျးတှငျး စညျးလုံးမှုကိုပါ ဖကျြဆီးနတေယျ။
အခွအေနတှေကေ ထငျးနတေယျ။ ” ရျောနယျဒိုကို အသငျးက အမွနျဆုံးထုတျပဈ ” ဆိုတာ လှနျခဲ့တဲ့ ၃ နှဈကတညျးက ဒါတှကေို ကွိုမွငျခဲ့တဲ့ အယျလီဂရီရဲ့ သတိပေးခေါငျးလောငျးသံဆိုတာ နောကျကအြသိဖွဈခဲ့ပွီ။ ဒီထကျနောကျကရြငျ တကယျ့အကြိုးနညျးဖွဈကုနျမယျ။ ဂြူဗငျတပျဈက ဘာဆကျလုပျသငျ့လဲသာ ရှေးရတော့မယျ။
ဂျူဗင်တပ်စ်နည်းပြဟောင်း အယ်လီဂရီဟာ ၂၀၁၈ ခုနှစ်က နည်းပြရာထူးကို မစွန့်ခင်မှာ အသင်းဥက္ကဌ အန်ဒရေယာ အက်ဂ်နယ်လီကို သတိပေးစကားတခွန်း ပြောခဲ့ဖူးတယ်။ အဲဒါက ” ရော်နယ်လ်ဒိုကို အသင်းကနေ အမြန်ဆုံးထုတ်ပစ်ပါ။ သူက ငါတို့အသင်းရဲ့ တိုးတက်မှုကို ပိတ်ဆို့ထားတယ် ” ဆိုတာပါ။
လက်ရှိမှာ သတင်းတွေ အဖောင်းပွဆုံးဖြစ်လာပြီး အငြင်းအခုံတွေ အမြင့်တက်ဆုံးဖြစ်လာတာက အိုးလေဒီအသင်းနဲ့ ရော်နယ်လ်ဒိုတို့ လမ်းခွဲချိန်တန်ပြီဆိုတဲ့ ဝေဖန်မှုတွေပါ။ တဖက်နဲ့တဖက် အကျိုးမပြုနိုင်ဘဲ နှစ်ဖက်ရှုံးအခြေအနေကို ရင်ဆိုင်နေရတယ်။
ဒီအနေအထားမှာ ဂျူဗင်တပ်စ်က အနာခံပြီး သူ့ကို ဆက်ထိန်းထားသင့်လား? အမြန်ဆုံး ရောင်းထုတ်သင့်ပြီလား? ဆိုတဲ့ အဆုံးအဖြတ်ချိန်ကို ရောက်လာတယ်။ အနာခံရတယ်ဆိုတာက ပထမအချက်အနေနဲ့ ဂျူဗင်တပ်စ်က ဝင်ငွေအရ အရမ်းအထိနာချိန်ဖြစ်နေတယ်။
ဒါတွေက အဘက်ဘက်က တွက်ချက်မှုတွေ ရှိနေတယ်။ ရော်နယ်လ်ဒိုက သူ့ရဲ့ပုံရိပ်နဲ့ ဂျူဗင်တပ်စ်ရဲ့ပုံရိပ်ကိုထပ်ပြီး ရွှေကိုရွှေချင်းထပ် မြတ်တဲ့ပေါင်းဖက်မှုအဖြစ် ထင်မြင်နေချိန်မှာ တကယ့်ကိန်းဂဏန်းလက်တွေ့အခြေအနေက အများထင်သလို မဖြစ်ခဲ့ဘူး။
နောက်တချက်က ကွင်းတွင်းမှာ ကျရှုံးတယ်။ ရော်နယ်လ်ဒိုရောက်လာလို့ ဂျူဗင်တပ်စ်က နောက်တဆင့်မြင့်တဲ့အသင်းဖြစ်လာမယ်လို့ မျှော်လင့်ထားခဲ့ပေမယ့် အသင်းခြေစွမ်းနဲ့ အောင်မြင်မှုကို ကြည့်ရင် ဒုံရင်းကဒုံရင်းပဲ ဆိုတာကို မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်လို့ ဒါဟာလည်း မှားယွင်းသွားခဲ့တယ်။
နောက်ထပ်တချက်ကတော့ လက်ရှိနည်းပြ ပီယာလိုရဲ့ ဘောလုံးဒဿနနဲ့ ရော်နယ်လ်ဒိုရဲ့ကစားပုံက ပြဒါးတလမ်း သံတလမ်းဖြစ်နေတယ်လို့ အမြင်ခံထားရတယ်။ ရော်နယ်လ်ဒိုကို အသင်းက အကျိုးမပြုနိုင်တော့သလို အသင်းကို ရော်နယ်လ်ဒိုက အကျိုးမပြုနိုင်တော့ဘူး။
ရော်နယ်လ်ဒိုက သူ့အကျိုးကိုတော့ သူပြုနေဆဲဖြစ်တယ်။ စီးရီးအေမှာ ၂၇ ပွဲကစားပြီး ၂၅ သွင်းထားပြန်တယ်။ ဒီနှစ်မှာ စီးရီးအေရွှေဖိနပ်ဆုက သူ့လက်ထဲရောက်လာတော့မယ့် တဦးချင်းအောင်မြင်မှုဖြစ်တယ်။ သူက တဦးချင်းဆုတံဆိပ်တွေကိုသာ ထိုင်ကြိတ်ချင်နေတဲ့သူလို့လည်း ကောင်းကောင်းအပြောခံထားရတယ်။
ဂျူဗင်တပ်စ်ကဘက်လည်း သူ့ကို တနှစ်ကို ယူရို ၃၁ သန်း ပေးချေရတယ်။ ဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှာ အသင်းဘက်က ပြန်ရတာက သင်းတယ်။ ဒီနှစ်ချန်ပီယံလိဂ်က ပြုတ်တယ်။ ၁၆ သင်းအဆင့်နဲ့ ဖျာလိပ်ရတယ်။ ရော်နယ်လ်ဒိုရောက်လာတဲ့ ၂၀၁၈ ကစကြည့်ရင် ချန်ပီယံလိဂ်အမြင့်ဆုံးရောက်တာက ကွာတားအဆင့်သာဖြစ်တယ်။
ဒီနှစ်က ပိုဆိုးတယ်။ ဂျူဗင်တပ်စ်ရဲ့၁၀ နှစ်တာအတွင်း အဆိုးရွားဆုံးရာသီကို ရင်ဆိုင်ရတော့မယ်။ အတ္တလန်တာကို ရှုံးပြီးချိန်မှာ စကူဒတ်တိုဖလားကို မျှော်လင့်ချက်မဲ့သွားပြီ။ ဒီအမှတ်ပေးဖလားဆိုတာ ဂျူဗင်တပ်စ်က ၉ နှစ်ဆက်တိုက် သိမ်းပိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် ပိုရင်နာနေကြတယ်။
အဆင့် ၅ ကို ဆင်းရတယ်။ ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်ရဖို့သာ ရွေးချယ်စရာရှိတော့တယ်။ အောင်မြင်မှုဆိုတာ မူးလို့ ရှုစရာတောင်မရှိတဲ့နှစ်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ ရာသီသိမ်းကို အဆင့် ၄ လုဖို့ ပြိုင်ဆိုင်ရမယ့် အခြေအနေ အိုးလေဒီရဲ့ သိက္ခာကို ကောင်းကောင်းသတ်ပါတယ်။
တသင်းလုံးအနေအထားမှာ စိတ်မကောင်းစရာတွေ တခုပြီးတခုဖြစ်လာတယ်။ ရော်နယ်လ်ဒိုကတော့ ရွှေဖိနပ်ဆုကို ပြေးပိုက်ဦးမယ်။ ဂျီနိုအာနဲ့ပွဲမှာ ဂိုးမရလို့ အဝတ်လဲခန်းနံရံကို လက်သီးနဲ့ထိုးတယ်။ ဂျာစီကို လွှင့်ပစ်တယ်။ အသင်းကို ဦးဆောင်ရမယ့်သူတယောက်က အသင်းတွင်း စည်းလုံးမှုကိုပါ ဖျက်ဆီးနေတယ်။
အခြေအနေတွေက ထင်းနေတယ်။ ” ရော်နယ်ဒိုကို အသင်းက အမြန်ဆုံးထုတ်ပစ် ” ဆိုတာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ နှစ်ကတည်းက ဒါတွေကို ကြိုမြင်ခဲ့တဲ့ အယ်လီဂရီရဲ့ သတိပေးခေါင်းလောင်းသံဆိုတာ နောက်ကျအသိဖြစ်ခဲ့ပြီ။ ဒီထက်နောက်ကျရင် တကယ့်အကျိုးနည်းဖြစ်ကုန်မယ်။ ဂျူဗင်တပ်စ်က ဘာဆက်လုပ်သင့်လဲသာ ရွေးရတော့မယ်။
ကြောငျးတျောကရနျစရှိတဲ့ အာဆငျနယျကို ယူရိုပါလိဂျဖိုငျနယျမှာ ယူနိုကျတကျက ခမြှေုနျးလိမျ့မယျလို့ ပေါလျစခိုးလျအတပျဟော